Izicelo ezingama-32 aziyi kusebenza kwi-iOS 11 | IPhone iindaba
Ii-apps ezingama-32 aziyi kusebenza kwi-iOS 11
Kunye nomboniso osemthethweni we-iOS 11 kunye nokumiliselwa kwe-beta yokuqala, siyibonile indlela iApple ethathe isigqibo sokususa ngokupheleleyo nawuphi na umkhondo wesicelo esenzelwe kuphela izixhobo ze-32-bit. Njengoko sibona kumxholo ophambili, i-iOS 11 iyahambelana kuphela nazo zonke izixhobo ze-Apple ezilawulwa ziiprosesa ezingama-64, oko kukuthi, ukusuka kwi-iPhone 5s, i-iPad Mini 2 ukubheka phambili kunye ne-6th generation iPod touch.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ngokurhoxiswa kwenani elikhulu lezicelo ezenzelwe izixhobo ezingama-32, izicelo ezingakhange zihlaziywe, iApple inyanzelisiwe ukuba isuse kwiVenkile yeApp. Kodwa kwakhona, ezo esinokuzifaka kwizixhobo zethu, ngokufika kwe-iOS 11, ziya kuyeka ukusebenza.
Okwangoku, i-iOS 11 isezandleni zabaphuhlisi, abakwazileyo ukuqinisekisa ukuba xa bezama ukuvula isicelo esenzelwe kuphela iprosesa ezingama-32, isibonisa umyalezo osazisa ukuba isicelo kufuneka sihlaziyiwe ukuze siqhubeke kwinguqulelo yamvanje ye-iOS eza kukhutshwa ngokusesikweni kuluntu ngo-Septemba, mhlawumbi ngokudibeneyo nokuqaliswa kweemodeli ezintsha ze-iPhone.
U-Apple wenza konke okusemandleni ukunqanda abasebenzisi ekusebenziseni ezi zicelo kwaye inyathelo lokuqala ibikukuzisusa kwiVenkile ye App. Umda wesibini wokusetyenziswa kweenguqulelo ngaphambi kwe-iOS 11, ngale ndlela iqinisekisa ukuba kuya kusiba nzima ukuzisebenzisa, ngaphandle kokuba sinekopi yazo kwikhompyuter yethu ene-iTunes. Ngokwengqikelelo yokuqala epapashwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ukupheliswa kwezi zicelo kuya kuthetha ukuncitshiswa kwezicelo ezingama-200.000, isoyikiso esibi kwiVenkile yeApple, kodwa ekuhambeni kwexesha kuya kuba luncedo kwinkqubo yendalo ka-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Ii-apps ezingama-32 aziyi kusebenza kwi-iOS 11
Ingxaki yoku iza xa ii -apps ziyeke ukuvuselelwa okanye zikhutshiwe kwivenkile yeapp njenge projekthi83113 ayizukundisebenzela U_U
Isishwankathelo sevidiyo yenqaku eliphambili izolo kwimizuzu eli-15
IDriveTribe, inethiwekhi yentlalo yabathandi bemoto